Brightening day: အဖြေ
"မသွားပါနဲ့.. ခွဲမသွားနဲ့လို့တောင် ရင်ဖွင့်ပြီး မတားမြစ်တတ်တဲ့ချစ်သူက ငါ့အတွက် ဘာအပျော်တွေများ သယ်ဆောင်ပေးနိုင်ဦးမလဲ?"
ကောင်မလေးရဲ့စိတ်တွေ အေးစက်လာသလို ခံစားမိတယ်။ တအောင့်ကြာမှ ကောင်လေးစကားစတယ်။
"ငါဘယ်လိုလုပ်မှ ငါ့ကို နင်ခွဲမသွားမှာလဲ?"
"နင့်ကို ငါမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်။ တကယ်လို့ နင်ဖြေတဲ့အဖြေက ငါ့စိတ်ထဲတွေးထင်ထားတဲ့ အဖြေနဲ့တူခဲ့ရင် နင့်ကိုငါ ခွဲမသွားဘူး။ ဥပမာ- ချောက်ကမ်းပါးစွန်းမှာရှိတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်ကို ငါအရမ်းကြိုက်တယ်။ အဲဒီပန်းကို ခူးရင် ချောက်ထဲပြုတ်ကျပြီး သေကိုသေရမယ်။ ငါ့အတွက် နင်ခူးပေးရဲလား?"
အဲဒီပန်းကို ငါသွားခူးမှာ မဟုတ်ဘူး။ သွားမခူးတဲ့အကြောင်း ငါ့ကိုရှင်းပြခွင့်ပေးပါ။
နင်က ကွန်ပြူတာနဲ့ စာတွေပဲရိုက်တတ်တယ်။ စက်ထဲက ဒေတာတချို့ ပျက်သွားခဲ့ရင် နင်က ကီးဘုတ်ပေါ်မှောက်ပြီး ငိုဖို့ပဲသိတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေတာတွေပြင်ဖို့ ငါ့လက်ညှိုးတွေ နင့်အတွက်ချန်ထားပါရစေ။
လျှောက်လည်ရတာကို နင်ကြိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နင်မကြာခဏ လမ်းမှားတယ်။ ဒါကြောင့် နင်လမ်းမပျောက်ဖို့ ငါ့မျက်စိတွေ နင့်အတွက်ချန်ထားပါရစေ။
လစဉ် မိန်းမသဘာဝဖြစ်တိုင်း ကိုယ်တွေအေးစက်ပြီး နင်ဗိုက်နာတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် နင့်ကိုယ်နဲ့ ဗိုက်လေးနွေးထွေးအောင် ပွတ်သပ်ပေးဖို့ ငါ့လက်ဖဝါးတွေ နင့်အတွက်ချန်ထားပါရစေ။
နင့်မှာ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းနည်းတယ်။ အထီးကျန်တဲ့ဝေဒနာမျိုး နင်ခံစားရမှာစိုးတယ်။ ဒါကြောင့် နင်မပျင်းမရိ စကားပြောဖော်ရဖို့ ငါ့ပါးစပ်ကို နင့်အတွက်ချန်ထားပါရစေ။
နင်က ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ အမြဲရှိတယ်။ ကွန်ပြူတာအလင်းကြောင့် မျက်စိတွေလဲ တော်တော်ထိခိုက်ခဲ့ပြီ။ ဒါကြောင့် နင့်အတွက်ငါကောင်းကောင်း အသက်ရှင်ရမယ်။ နင်အိုလာတဲ့အခါ နင့်ကို လက်သည်းညှပ်ပေးမယ်၊ ဆံပင်ဖြူတွေ နုတ်ပေးမယ်။ နင့်လက်ကို အမြဲတွဲထားမယ်။ ပင်လယ်ဘေးက သောင်ကမ်းစပ်မှာ လမ်းလျှောက်ကြမယ်။ ရောင်စုံပန်းတစ်ပွင့်ချင်းစီက လှပတဲ့နင့်မျက်နှာနဲ့တူကြောင်း ပြောပြမယ်။
ဒါကြောင့် ငါ့ထက် နင့်ကိုချစ်မယ့်သူ နင်မတွေ့မချင်း အဲဒီချောက်ကမ်းပါးထိပ်မှာ ပေါက်နေတဲ့ပန်းကို ငါသွားမခူးချင်ဘူး"
ကောင်မလေးရဲ့မျက်ရည်တွေ စာရွက်ပေါ် တစ်ချက်ချင်းစီးကျလာခဲ့တယ်။ မျက်စိကို တစ်ချက်ပွတ်ပြီး ကောင်မလေးဆက်ဖတ်ပြန်တယ်။
ဒါကပဲ အချစ် ဒါမှမဟုတ် ဘဝပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အချစ်တွေက ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့ ပတ်လည်ဝန်းခံရတဲ့အခါ ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့ ပိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာတွေကို တောင့်တလာတတ်တယ်။
တစ်ဖက်သားရဲ့ သာမန်အပြုအမှုနဲ့ အမှုအရာလေးကိုကြည့်ပြီး ချစ်တယ်၊ မချစ်ဘူးလို့ သတ်မှတ်လို့မရဘူး။ အချစ်မှာ တသတ်မှတ်တည်းသတ်မှတ်ဖို့ ပုံသေနည်းမရှိဘူး။
စိတ်အားငယ်ချိန်မှာ မှီခိုနိုင်တဲ့ ပုခုံးတစ်စုံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
အချစ်ကို ခံစားနားလည်တတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်.....
မှတ်ချက်။ ။ဘယ်သူရေးတာလဲတော့ မသိပါဘူး email ထဲ ရောက်လာလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အဲဒါကြောင့် ပိုင်ရှင်ကို credit မပေးနိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါ။ ပိုင်ရှင်ကို သိသူများ comment ထဲမှာ ရေးသွားနိုင်ပါသည်။
သိပ်ကောင်းတဲ့ စာသားလေးနော် ...တကယ်.. လောကကြီးမှာ ဒီလိုချစ်တတ်တဲ့သူ ရှိတယ်လို့ .. မထင်မိပါဘူး.. (ကိုယ်ကလွဲရင်...)...း)